'Dhadha Dzinza' nyeredzi Willie Robertson isingazivikanwe mushure mekugerwa: Pic - Nhau
'Dhadha Dzinza' nyeredzi Willie Robertson isingazivikanwe mushure mekugerwa: Pic
Willie Robertson shear anotarisa zvakasiyana!
Iyo 'Duck Dynasty' nyeredzi - yakagara ichizivikanwa nekuve ine ndebvu dzakasvibirira uye vhudzi risingadzoreke rakadarika nepamafudzi ake - yawana makeover yakakura. Uye haatombotarisike zvakafanana!
Ndiyo yekutanga kuveura bvudzi kwaakawana mumakore gumi nemanomwe.
Cindy Ord / Getty Mifananidzo
NeChipiri, chaiyo TV nyeredzi yakatumira vhidhiyo ku Instagram iyo yakamuratidza achigerwa uye ndebvu dzeturu.
Wese munhu arikudzokera kubarber, ndakafunga kuti ndinofanira kuzviedza futi. # 17years
Chinyorwa chakagovaniswa na Willie Robertson (@realwilliebosshog) paJun 9, 2020 na4: 00 pm PDT
'Ndiri kuzvinzwa sendichipera simba,' anoudza stylist yake sevacheki vanotanga kuveura mativi emusoro wake. 'Ndiri kunzwa semwana wechikoro… handigone kumirira kuenda kuchitoro uye hapana anoziva kuti ndiri ani. Ndichafara kwazvo. '
Vhidhiyo yemaminitsi matatu yaWillie inotorawo maitiro emukadzi wake Korie paakaona shanduko - kunyangwe iye asina kana kuziva murume wake wemakore makumi maviri nemasere pakutanga. Anokatyamadza dzimwe nhengo dzemhuri muvhidhiyo, futi.
'Wese munhu arikudzokera kubarber, ndakafunga kuti ndinofanira kuzviedza futi. # 17years, 'Willie akataura vhidhiyo iyi.
Nhengo dzinoverengeka dzemhuri dzakagovana mifananidzo yeiyo isina-vhudzi Willie kuna Instagram mushure, kusanganisira Korie.
kendall jenner uye ben simmons
SURPRISE !! @realwilliebosshog yakativhundutsa isu tese nehukuru hwakazotevera-hwekuparadzanisa bvudzi, ha! Hatina kuona mutsipa wake mumakore gumi nemashanu ndinoda murume uyu! Akanaka uye anogara achichengeta hupenyu hunonakidza ⠀ ⠀ (swipe nepakati kuti uone zvese zvinoitika. Iye na @ jdowen7 vakaputika vachienda mudhorobha rese kutishamisa, ha! Akatotenga hembe nyowani kuti tirege kuziva yake mbatya. Paanoenda, anopinda ese mukati)
Chinyorwa chakagovaniswa na Korie Robertson (@bosshogswife) paJun 9, 2020 pa4: 25 pm PDT
'KUShamisika !! @realwilliebosshog yakativhundutsa isu tese nehukuru hwakazotevera-hwekuparadzanisa bvudzi, ha! Hatina kumboona mutsipa wake mumakore gumi nemashanu, 'akanyora muchinyorwa. 'Ndinoda murume uyu! Akanaka uye anogara achichengeta hupenyu hunonakidza. '
Akawedzera, 'Iye na @ jdowen7 vakaputika vachienda kudhorobha rese kutishamisa, ha! Akatotenga hembe nyowani kuti tirege kuziva mbatya dzake. Paanoenda, anopinda ese. '
Natalie Maines: 'Nhasi ndinogona kunyatsoita hukama naGeorge Bush'
jennifer lopez uye kim kardashian
olivia newton john mwanasikana purasitiki yekuvhiya
aripi russell crowe izvozvi
jim parsons uye todd spiewak akaroora